Andro Iray iainana Helon’ny Fifindràmonina Ao Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2016 13:03 GMT
Ny sisintany iraisan'i Etazonia sy Meksika. Sary an'ilay mpampiasa Flickr, Brooke Binkowski. CC BY 2.0
Ity tantara nosoratan'i Heidi Shin ity dia nipoitra voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 18 Oktobra 2016. Naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana hifampizara votoaty.
Miasa alina aminà orinasa mpikarakara trondro ao Boston i Estela. Manavaka ireo trondro fotsy vao azo izy, no sady manaisotra izay katsentsitra na kankana mety hisy. Indray andro raha nody izy, tamin'ny 8:00 maraina, efa an-dàlana hamonjy sekoly ireo zanany roalahy 12 sy 15 taona. Amin'ny ankapobeny, maka aina kely i Estela alohan'ny hikarakaràny ilay zanany mbola kely mandritry ny andro.
Saingy hafa ny androany. Talata ny andro, tokony handalovan'ny manampahefana iray avy amin'ny fifindràmonina hijery ny momba azy. Saika isaky ny Talata no mandalo ilay manampahefana, fa tsy voatery ho izay foana. Tsy misy fotoana voafaritra mialoha handalovany, fa ny efa mahazata dia ho alohan'ny 4:00 tolakandro.
Tsy sahy matory izy, anefa. Raha tsy reny ny feon'ny lakolosim-baravarana izy, ho be ny fiantraikan'izay.
Tamin'ny Septambra lasa teo, tonga tao Etazonia avy any Salvador i Estela, tamin'ny alàlan'ireo mpampiampita an-tsokosoko. Nandositra namakivaky ny alina izy sy ny roa tamin'ireo zanany rehefa tonga nandrondrona ny varavarany ireo mpikambana amin'ny fikambanan-jiolahy nandrahona ny haka ny zanany lahy efa zatovo. Fantany ny efa nanjo ireo zatovolahy nanandrana nandositra ireo andian-jiolahy ireo: ratra henjana sy mafy, fidirana hopitaly sy fandrahonana ho faty. Tena antso akaiky kely ilay izy, saingy tafatsoaka tamin'ireo mpikambana amin'ny andian-jiolahy ihany ry zareo.
Vantany vao tonga tany Texas i Estela sy ireo zanany, dia nitolo-batana tamn'ireo Amerikana Mpiaro Sisintany ary notazonina tao amin'ny ivontoerana iray famonjàna. Noho ny fangatahan'izy ireo fialokalofana, navotsotra avy ao amin'ilay toeram-pihazonana ilay fianakaviana. Talohan'ny nialàny anefa, dia nasiana fehy hanarahana maso azy ny hato-tànan'i Estela mba hanarahana izay toerana alehany arakaraky ny fandrosoan'ny raharaha fangatahany fialokalofana. Efa lasa fitaovana iray mahazatra hanarahana maso ireo mpitady fialokalofana ireny fehy ireny.
Estela, izay nangataka ny tsy hampiasàna ny tena anarany feno satria mbola miantona ny fangatahany fialokalofana, dia nitondra ilay fehy nandritra ireo volana voalohany niainany tao Etazonia, na amperinasa na matory na misasa. Mainty sy mibahan-toerana ilay izy ary tsy maintsy fahanana matetika isanandro. Ora roa no ilaina hamahanana azy, ary ho an'ireo ora roa ireo, mitorevaka mifatotra amin'ny lavaky ny rindrina izy.
Efa volana maro izay no nesorina ilay fitaovana, ary matahotra ny hiverenan'ilay fehin-tànana izy raha sanatria ka tsy mifanojo amin'ny fitsidihan'ilay manampahefana avy amin'ny fifindràmonina.
Tany ampidohan'ny tolakandro, raha eo am-piandrasana ny fandondonana ao am-baravarany i Estela, naneno ny telefaona, ary nitomany ny zanany, tsy afaka niala sasatra. Voalohany, niantso avy any amin'ny toeram-pihazonana iray ao Texas ny rain-janany. Eny, handefa vola izy, hoy izy. Ary eny, nahita mpisolovava izy, dia efa nahazo datin'andro hiatrehana fitsaràna ry zareo.
Raha ny tena zavamisy, sarotra ny mahazo fandresena amin'ny tranganà fitadiavana fialokalofana, indrindra fa hoan'ireo olona avy any Amerika Afovoany izay miezaka ny handositra ny herisetra any amin'ny firenena niavian'izy ireo. Marobe ireo olona nandalo taminà toeram-piazonana no tsy mba mahazo fanohanana araka ny tokony ho izy amin'ny resaka fisoloana tena manoloana ny lalàna. Ahitàna andianà fanontaniana maro karazany ny raharahan'izy ireny, ary ny antsipirihany sy ny fizotran'ny fakàna am-bavany nataon'ny mpangataka iray dia tsy maintsy mitovy hatrany isak'izay miova ireo tomponandraikitra mandray ny taratasiny — tsy mora tafitan'ireo mpandika teny sy noho ny tsiaro efa torovan'ny holatry ny ratra.
Tamin'ny 3:00 tolakandro, vao avy nametraka vilanin-dasopy Salvadoriana teo ambony fàtana i Estela. Tafody an-trano avy any an-tsekoly ny zanany. Namonjy efitrano fandriana ilay zanany efa zatovo, raha ilay kelikely kosa, efa 12 taona ankehitriny, mipetraka eo an-databatra ao an-dakozia milalao ny telefaona. Tany amin'ny tranon'ny renibeny izy tamin'ilay alina nandosiran'i Estala an'i Salvadaoro niaraka tamin'ireo zanany roa hafa. Nandefa olona haka azy izy telo volana taorian'izay.
Mba te-handeha any amin'ny sekoly eo amin'ny manodidina miaraka amin'ireo rahalahiny izy, saingy efa tsy misy toerana intsony ao amin'io sekoly io ho an'ireo mpianatra vao hanomboka hianatra ny teny Anglisy. Noho izany, isaky ny amin'ny 6:00 maraina, mandray fiara iraisana izy hitondra azy any amin'ny sekoly iray ambaratonga faharoa aminà tanàna lavidavitra miala eo. Manana namana roa izy any an-tsekoly, izay samy zazalahy mpifindra monina avy any Salvadoaro ihany koa. Lazain'i Estela fa tsy dia resahan'ny zanany lahy mihitsy ny diany nataony volana vitsy lasa izay namakivaky ny sisintany.
Tamin'ny 3:55 tolakandro, naneno ilay lakolosim-baravarana. Raisin'i Estela ilay zanany mbola kely ho eny am-balahany ary nihazakazaka izy hijery izay olona tao. Saingy ny faktera no tao. Tsy niteny na inona na inona izy — na tamiko na tamin'ilay rangahy tao am-baravarana. Nakatony fotsiny ny varavarana ary avy harany dia nanitsy nankany an'efitrano fandriana izy. Raha tsy tonga amin'ny 4:00 tolakandro ilay tomponandraikitry ny fifindràmonina, dia tsy ho tonga intsony androany. Niankina i Estela , nandrotsirotsy an-janany. Hatory ora roa izy ireo alohan'ny tsy maintsy hiverenany any ampiasàna indray.
Tantara novokarina niaraka tamin'ny fanohanan'ny “Images of Voices and Hope Restorative Narrative Fellowship. (Sarin'ny Feo sy ny Fanantenana)